Roller inopofumadza machira vagadziri & vanotengesa - China Roller inopofumadza machira fekitori
Anopfuura makore makumi maviri nemasere ruzivo
Nheyo Dzedu Dzinotungamira
Maitiro, maitiro, uye maitiro
Vanhu ndivo vanotarisa
Wepamusoro 6 zvikonzero zvekusarudza isu
Greenguard SVIRA SGS UL
Mucheka wePolyester Sunscreen
Fiberglass Sunscreen Mucheka
Sunscreen Mbizi Mucheka
Roller inopofumadza Mucheka
Polyester Roller inopofumadza Mucheka
Semi-kudzima magetsi ekunze Sunetex
Semi-kudzima magetsi MagicalTex
Kudzima magetsi MagicalTex
Washington City Offices Roller inopofumadza Mucheka
Verman Anopofumadza Mucheka
Shangri-la inopofumadza Mucheka
Vertical inopofumadza jira
Nyuchi Inopofumadza Mucheka
Kumba Kushongedza Verman Anopofumadza Mucheka Semi-kudzima magetsi
New Design Wholesale Wholesale Manera Tepi Shangri-La inopofumadza F ...
Imba Yekushongedza Horizontal Shangri-La Bofu Jira Semi-B ...
Triple Shade Shangri-La Roller inopofumadza Mucheka WeRes ...
Imba Yekushongedza Dual Rainbow Inopofumadza Mucheka WeHofisi
China Kushongedza Yakavanzika Zebra Bofu Mucheka WeHofisi Wi ...
Yakapetwa-Ruvara Ruviri Rakavhara Rinovhara Machira 100% Polyester
Rainbow Roller inopofumadza Masikati-Husiku-Zebra Curtain Shades ...
Kudhinda kudzima magetsi magetsi kweZebra Zuva neusiku Rainbow Duo Bl ...
China Roller inopofumadza Masikati & Husiku Shades Chikamu Com ...
China Hofisi Side Screen Chidzitiro cheScreen cheZebra Auto ...
China Machine Mainland Faux Linen Zebra Dual Zuva uye ...
China Windows Sun Rudzi Polyester Sunscreen Rolling ...
Shutter Window Sunscreen Yakagadzirwa Spring Roller Bli ...
China Windows Sun Shade Polyester Kutenderera Zvine mota ...
Outdoor Chinyorwa Window Shutter Hafu Shade Dual rukoko ...
Gadzira Sunscreen Mucheka Kubva China inopofumadza Facto ...
Dzidza Chiedza chezuva Kuchenesa Bhizimusi Sunscreen Roller ...
Customized Width China Windows Kushongedza keteni Co ...
China Mugadziri Sunscreen Roller inopofumadza Mucheka Su ...
Wholesale Anti-UV Washington City Offices Sunscreen Nemicheka For R ...
Yemahara Mharidzo Semi Kudzima magetsi Roller Blind Mucheka
Eco-Inoshamwaridza Roller Fabric Polyester Semi Kudzima magetsi
Blinds Mugadziri Roller Blinds Semi Kudzima magetsi magetsi fa Fa
Sunetex Semi Blackout Roller Blind Fabric yakagadzirwa ne100% polyester ine mhando yepamusoro uye mavara akanaka. Iine mbiri kumeso kwemavara glue yekumatira nzira iyo inoita kuti ive nemhedzisiro yakanaka pakuchengeta kunze kwechiedza uye wega kuchengetedzwa kwepachivande. Yakanaka mhando polyester zvinhu zvinogona kuita kuti igare, hapana chakuvhuvhu, hapana chipfukuto, hapana deformation, hapana track mushure menguva refu-nguva kushandiswa.
Sunetex Roller Blind Blackout Fabric inozivikanwa kwazvo pakati pevatengi vedu, ine yakakwira yekutenga chiyero. Zvigadzirwa zvedu zviri mune yakanaka mhando uye inofadza mutengo. Tine yakaderera MOQ iwe. Nekudaro, zvisinei nekuti huwandu hwako hwakakura kana hudiki, tinogona kuita bhizinesi newe. Nehutano hwakanaka uye basa rakanakisisa, tinotenda tinogona kuva mutengesi akasimba kwauri. Uye nekuda kwekudyidzana kwedu kwekutanga, tinogona kukupa mahara emahara kwauri kuti utarise mhando uye neruvara.
China Kushongedza Zvakavanzika Roller Blind Fabric Semi kudzima magetsi
Sunetex Jacquard Semi-Blackout Roller Blinds Fabric inokwikwidza. Yakanaka uye fashoni. Iine maviri kumeso dhizaini yekumira nzira, zvigadzirwa zvedu zvine semi-kudzima magetsi. Mucheka wedu unopenya, izvo zvinogona kuita kuti imba yako ive yakajeka. Kunze kwaizvozvo iwe unogona kuona iyo inoyevedza nekuti iri semi kudzima magetsi. Tine mhando dzakasiyana dzemicheka yesarudzo yako. Zvese zvigadzirwa zvedu zviri mune yakanaka mhando uye inonzwisisika mutengo.
Zvigadzirwa zvedu zvinonakidzwa nemutengo wepamusoro wekutenga pakati pezvigadzirwa zvedu. Tiri nyanzvi mugadziri inopofumadza machira. Tine MOQ diki, kana odha yako iri hombe, ticharonga kugadzirwa kwako, zvinoda mazuva makumi matatu kuti vazvigadzire. Kana yako odha iri diki, usazvidya moyo, isu tine yakajairika stock yezvinhu zvinopisa zvekutengesa zvinhu. Isu tiri kukwikwidzana mune zvigadzirwa zvine musoro. Tinogona kupa emahara sampuli ako ekuti utarise mhando uye ruvara.
Inotyaira Window Shutters inopofumadza Mucheka
Sunetex Inotyaira Window Shutters inopofumadza Mucheka wakagadzirwa ne polyester mune yakanaka mhando. Yakagadziriswa chigadzirwa ndeimwe yebhizinesi redu guru. Tine akasiyana mavara uye akasiyana hupamhi hwesarudzo yako. Chinhu chimwe nechimwe chine kutaridzika kwakanaka uye mhando yakanaka.Iye machira ndeye-oiri-chiratidzo uye haina mvura, zviri nyore kuchenesa, kuoma kana yangokwizwa. Uye ine kugona kwakanaka mumumvuri uye ine yakanaka yekufefetera mhedzisiro.Inokodzera yekushandisa kumba uye hofisi.
Sunetex Inotyaira Window Shutters inopofumadza Mucheka ndeimwe yematsi edu mbeveve. Inogona kukuchengetedza yakanyarara nharaunda iwe. Isu tinopa gumi-gore garandi kune yega yezvinhu zvedu. Uye nekuda kwekutanga kushandira pamwe, tinogona kukupa ivhu kwauri. Tine MOQ diki, kana odha yako iri hombe, ticharonga kugadzirwa kwako, zvinoda mazuva makumi matatu kuti vazvigadzire. Kana yako odha iri diki, usazvidya moyo, isu tine yakajairika stock yezvinhu zvinopisa zvekutengesa zvinhu.
Roller Mapofu Maketeni Machira Semi Kusviba
Sunetex Jacquard Roller Blinds Fabric Blackout Series zvigadzirwa zvakagadzirwa ne100% polyester ine mhando yepamusoro. Isu tinopa micheka yejacquard nenzira dzakasiyana dzekunamatira. Yakapetwa kumeso dhizaini yekumhara nzira inogona kugadzira semi kudzima micheka, furo chena yekumira nzira inogona kuita magetsi ekudzikisa machira. Zvigadzirwa zvedu zvakakodzera chikoro, hofisi uye kumba.
Zvigadzirwa zvedu zvinovavarira kuita kuti hupenyu hwako huve nani. Zvigadzirwa zvedu kumanikidza kuramba uye hupenyu hwakareba hwebasa, maererano nehunhu hunochenjerera, shading mhedzisiro zvakare yakanaka kwazvo, pateni yakanaka-inotaridzika, yakapusa uye yakashongedzwa mamiriro, nyore kuisa. Nemutengo unodhura, zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa pakati pevatengi vedu. Tinogona kupa emahara sampuli!
Semi Kudzima magetsi Window Blind Fabric
Sunetex Semi Blackout Window Fabric White Coating inogadzirwa ne polyester mune yakanaka mhando. Iyo ine yakanaka shading mhedzisiro uye inogona kunyatso kuvharira yakasimba mwenje uye ultraviolet mwaranzi. Tine akasiyana mavara uye akasiyana hupamhi hwesarudzo yako.
Jira redu harina humbowo hwemafuta uye harina mvura, zviri nyore kuchenesa, kuoma kana yangokwizwa Uye ine kugona kwakanaka mune shading uye ine yakanaka yekufefetisa mhedzisiro. Tine MOQ diki, kana odha yako iri hombe, ticharonga kugadzirwa kwako, zvinoda mazuva makumi matatu kuti vazvigadzire. Kana yako odha iri diki, usazvidya moyo, isu tine yakajairika stock yezvinhu zvinopisa zvekutengesa zvinhu. Tinogona kupa emahara sampuli ako ekuti utarise mhando uye ruvara.
Slubby Yarn Yakapofumadza Mucheka Ruviri Ruoko Dip Kuputira
Sunetex Slubby Yarn Blind Fabric inogadzirwa ne100% polyester semi machira ekudzima magetsi ane mhando yepamusoro. Tinogona kupa 200/230/250/300 cm hupamhi hwakasiyana hwindo rako, uye urefu hwakaenzana iamamita makumi mana pamupumburu. Zvigadzirwa zvedu zvinokodzera hofisi, chikoro uye imba. Tine mhando dzakasiyana dzemicheka yesarudzo yako, unogona kusarudza chero imwe.
Tiri nyanzvi mugadziri inopofumadza machira kweanopfuura makore gumi nematanhatu. Nemhando yepamusoro yekugadzira, yedu yekugadzira inokwikwidza, nguva yekugadzira ipfupi. Kuti uve nechokwadi chekukupa iwe zvinhu zvedu zvakakwana, tinoita 100% kuongorora zvigadzirwa zvedu. Isu tine yakaderera MOQ, Tinogona kuronga kuendesa nekukurumidza kuitira kana tiine stock. Isu tafekitori, zvigadzirwa zvedu zviri zvemhando yepamusoro uye mutengo unokwikwidza. Kubatira pamwe kwekutanga, tinogona kukupa mahara emahara.
Smart Home Roller Bofu Mucheka Yakakwirira Pakati
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric inogadzirwa ne100% polyester ine mhando yepamusoro uye mavara akanaka. Yakanaka mhando polyester zvinhu zvinogona kuita kuti igare, hapana chakuvhuvhu, hapana chipfukuto, hapana deformation, hapana track mushure menguva refu-nguva mashandisirwo.Neviri kumeso kwemavara gingi yekunamatira nzira, inoita kuti ive nemhedzisiro yakanaka mukuchengetedza kunze kwechiedza uye wega kuchengetedzwa kwepachivande.
Zvigadzirwa zvedu kumanikidza kuramba uye hupenyu hwakareba hwebasa, maererano nehunhu hunochenjerera, shading mhedzisiro zvakare yakanaka kwazvo, pateni yakanaka-inotaridzika, yakapusa uye yakashongedzwa mamiriro, nyore kuisa. Zvigadzirwa zvedu zvinovavarira kuita kuti hupenyu hwako huve nani. Nemutengo unodhura, zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa pakati pevatengi vedu. Tinogona kupa emahara sampuli!
Zuva Shading Roller Blind Semi Kudzima magetsi Mucheka
Sunetex Semi Blackout Roller Blind Fabric yakagadzirwa ne polyester ine mhando yepamusoro uye mavara akanaka. Zvigadzirwa zvedu zviri zvemhando yepamusoro, zvinogara kwenguva refu, hapana chakuvhuvhu, uye hapana chipfukuto. Tine mavara echinyakare esarudzo yako. Chinhu chimwe nechimwe chine chitarisiko chakanaka, chakanakisa, chine rupo, uye chinoshamisira. Tinogona kupa 230cm uye 300cm dzakasiyana hupamhi hwaunosarudza kubva. Kurema kwemachira edu ndeye 118gsm pamamirimita mita, uye isu tine dzakasiyana dzakasiyana mhando yesarudzo yako, unogona kusarudza chero munhu.
Iine iyo dip-yekupfeka nzira, iyo inoita kuti ive yakanaka mhedzisiro pane kufefetedza uye mwenje. Iyo inogona kukubatsira iwe kuchengetedza simba. Iyo yakakodzera kwazvo chikoro, imba uye hofisi kushandiswa. Isu tiri vekutanga fekitori yekupa, kana iwe ukabatana pamwe nesu, iwe unogona kuve uine max margin. Yekutanga kubatana, tinogona kukupa mahara emahara kwauri!
Zuva Shading Semi Kudzima magetsi Roller Blinds Mucheka
Sunetex Sun shading Semi Blackout Roller Blind Fabric rakagadzirwa nepolyester, isu tine mhando dzakasiyana dzemicheka yesarudzo yako. Yakagamuchirwa nemicheka inoshamwaridzika zvakatipoteredza, isina-chepfu uye isinganetsi iyo inoita nharaunda yakasununguka kwauri. Iyo inokodzera French Window. Unogona kuva nenzira dzakasiyana dzekumisikidza, senge Kuisa Ceiling, Kunze Kuisa, Kuisa Kwekunze zvichingodaro. Zviri nyore kuti iwe uise iyo.
Hwindo Keteni Jira 100% Polyester
Sunetex Window Curtain Fabric 100% Polyester Series zvigadzirwa zvakagadzirwa ne100% polyester ine mhando yepamusoro. Isu tinopa micheka yejacquard nenzira dzakasiyana dzekunamatira. Yakapetwa kumeso dhizaini yekumhara nzira inogona kugadzira semi kudzima micheka, furo chena yekumira nzira inogona kuita magetsi ekudzikisa machira. Zvigadzirwa zvedu zvakakodzera chikoro, hofisi uye kumba. Gamuchirai mameseji enyu!
Groupeve Ltd, inyanzvi inogadzira machira ekupofumadza kweanopfuura makore gumi nematanhatu. Sunetex ndeimwe yemhando dzedu dzinozivikanwa mukambani medu. Isu tinopa machira e roller roller inopofumadza, zebra inopofumadza, yehuchi inopofumadza, yakamira inopofumadza uye zvichingodaro. Tinogona kupa mahara sampuli kwauri.
China Fekitori Roller inopofumadza Mucheka Semi Kudzima magetsi
MagicalTex Roller inopofumadza Mucheka ndechimwe chedu chinopisa chinotengesa zvigadzirwa. Iyo yakagadzirwa ne polyester ine mhando yepamusoro uye nemutengo unonzwisisika. Ivo vanogadzikana kwazvo, hupenyu hwavo hunogona kuve makore gumi. Nehutano hwakanaka uye basa rakanakisisa, isu takakurumbira pakati pevatengi vedu. Isu tinopa 24hours sevhisi kune vatengi vedu kuti vakutsigire.
Jira redu rakasimba, hapana chakuvhuvhu, hapana chipfukuto, hapana deformation, hapana track mushure menguva refu-nguva usag uye isiri nyore kuumbika. Tine yakasimba yemhando yekutonga, isu tichabvisa machira ane hurema mune yedu yekugadzira maitiro. Tiri kuvavarira chete kupa micheka akakwana vatengi vedu. Tinogona kupa emahara sampuli kwauri iwe yekutanga kubatana!
China Mutengesi Wholesale Blind Fabric Semi Blackou
MagicalTex Roller Blind Mucheka wakagadzirwa nepolyester, isu tine mhando dzakasiyana dzemicheka yesarudzo yako. Iine advanced ultrasonic yekucheka tekinoroji, inoita kuti iite burr kumucheto, yakanakisa kwazvo. Iyo inokodzera French Window. Unogona kuva nenzira dzakasiyana dzekumisikidza, senge Kuisa Ceiling, Kunze Kuisa, Kuisa Kwekunze zvichingodaro.
Jira redu yakasimba, hapana chakuvhuvhu, hapana chipfukuto, hapana deformation, hapana njanji pashure refu-nguva kushandiswa uye kwete nyore kuti deform. Tine yakasimba yemhando yekutonga, isu tichabvisa machira ane hurema mune yedu yekugadzira maitiro. Tiri kuvavarira chete kupa micheka akakwana vatengi vedu. Tine MOQ diki, kana odha yako iri hombe, isu tinoronga zvigadzirwa zvako, uye kana odha yako iri diki, usatombo kunetseka, isu tine zvakajairika stock yezvinhu zvinopisa zvekutengesa. Tinogona kupa emahara sampuli kwauri!
123456 Inotevera> >> Peji 1/8
Kero: Kwete. 988 Middle Chikamu cheJiannan Avenue, High-Tech. Nzvimbo, Chengdu, China